MY ANSWER IS YOU - silvermist97 - Wattpad
44K Reads 3.4K Votes 29 Part Story
By silvermist97 Ongoing - Updated Dec 21, 2017
MY ANSWER IS YOU ( YAOI )
သူ့ပခုံးကိုလာထိတွေ့နေတဲ့ အထိတွေ့တစ်ခုကြောင့် Jun Myeon အိပ်နေရာကနေ လန့်နိုးသွားရသည် ...... ည
ကြီးအချိန်မတော် သူ့ကိုလာနှိုးနိုင်တာဆိုလို့ သူတစ်ယောက်ပဲရှိတာကြောင့် Jun Myeon မျက်လွှာတွေ ပွင့်လာ
ခဲ့သည် ..... သူဆိုတာ .......
Wu Yi Fan >>> သိုင်းလောကမှာ နာမည်ကြီးဂိုဏ်းတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင် ..... နာမည်ကြားတာနဲ့တင်ကို မသိ
သူမရှိလောက်အောင် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေသူ .....စီးပွားရေးဘက်မှာလည်း အကွက်
မြင်တတ်လွန်းတာကြောင့် စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေဆိုတာ လက်ညိုးထိုးမလွဲ ......
ညအချိန်မတော်ကြီး ဘာလာလုပ်တာလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ ဝတ်ထားတဲ့ဝတ်ရုံဖြူပေါ်မှာ သွေးတွေစိမ့်ထွက်
နေတာကြောင့် ချင်းချင်းနီနေသည် ..... မျက်နှာကတော့ သွေးရောင်မရှိအောင်ပင် ဖျော့တော့နေချေပြီ ...... သူ့
မှာ အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်နေတာတောင် ဘယ်ပျောက်သွားမှန်းမသိပဲ ဆံပင်တွေကို ကမန်းကတန်းစုစည်းလိုက်ရင်း
အနာကို ဆေးကြောကာ ဆေးထည့်ပေးဖို့ စိုင်းပြင်းလိုက်ရသည် ..... ဆေးထည့်ပေးတော့ နာကျင်မှုကို ဂရုမ
ထားတာလား ..... ဒါမှမဟုတ် အံကြိတ်ခံနေတာလားတော့မသိ ...... ညည်းသံတစ်စက်လေးတောင် ထွက်မ
lovelygirlexo-l Apr 07, 2015
Get notified when MY ANSWER IS YOU is updated
111K 7.4K 5.1K
454K 48.7K 10.4K
122K 9.8K 16.6K
192K 23K 5.8K
340K 30.6K 3.5K
24K 2.3K 78
25.1K 3.2K 216
La Blonde et Le Prince?
298K 17.1K 26.1K
Dès leur rencontre Lucy va le détester, mais de l'amour à la haine il n'yaqu'un pas ...?
682K 56.3K 29.6K
66.8K 7K 388